I-China Plate kunye ne-Tube Laser Cutting Machine yoMvelisi kunye noMthengisi | Guo Hong
Plate kunye Tube Laser Cutting Matshini
Plate kunye ityhubhu umatshini ifayibha ahlabayo uyakuqonda ukusika izinto ezimbini ezahlukeneyo iimilo kwisixhobo umatshini efanayo. Yamkela, inkqubo yokuqhuba kunye nepinion drive, kunye nenkqubo yokusika ye-CNC, kwaye kulula ukuyisebenzisa kwaye kulula ukuyigcina. Ngaphandle koko inkqubo yendibano engqongqo iqinisekisa ukusebenza okuzinzileyo komatshini wokusika we-CNC we-laser ngokuchaneka okuphezulu. Optical ifayibha laser ukusika umatshini ngezixhobo eziphezulu zebakala, ezibonelela abasebenzisi ngesakhono sokusika esinamandla kunye nokusebenza. Ke ngoko lolona khetho lufanelekileyo lweplate yoqoqosho kunye nokulungiswa kwemibhobho.
Plate kunye ityhubhu laser ukusika umatshini
Ukusetyenziswa kabini kunye nokonga iindleko
Ababini kwelinye banokusika zombini iipleyiti kunye nemibhobho
Phosa umqadi wealuminium
Ukufakwa kweNkxaso yeZenzekelayo
Isebenzisa uyilo lenkxaso ityhubhu ekrelekrele, enokusombulula iingxaki zokumka kwinkqubo yokusika ityhubhu ende.
Uyilo lwe-chuck womoya
Ngaphambili nangemva uyilo nokubotshwa chuck kulungele ukuba ufakelo, okonga abasebenzi, kwaye akukho banxibe. Ukuqinisekisa uzinzo lokondla kunye nokusika ukuchaneka; Uhlengahlengiso oluzenzekelayo lweziko, olufanelekileyo kwimibhobho eyahlukeneyo, isantya sokujikeleza okuphezulu, kunokuphucula ukuqhubekeka ukusebenza ngokufanelekileyo.
Ubukhulu. Isantya sokuhamba 70m / min
Isantya esikhawulezayo 0.6G
1. Inkqubo ethembekileyo ethembekileyo yokukhanya kunye nenkqubo yolawulo.
2. Kabini kunye notshintshiselwano lomsebenzi weqonga ukonga ixesha kunye nendleko.
3. Ngokukodwa ukusika iipleyiti zesinyithi kunye nemibhobho yesinyithi, ukonga iindleko.
4. Uyilo olutsha lomatshini wonke onemijelo yasekhohlo nasekunene yokugcina ingqokelela yenkunkuma.
Egqithileyo Umatshini wokusika weFiber Laser
Okulandelayo: Umatshini wokusika i-Tube Fibre Laser
I-cnc laser cutter iyathengiswa
Abenzi bemishini yokusika i-laser
cnc umatshini laser ukuthengiswa
ifayibha laser ukusika ialuminium
Umatshini wokusika we-china china
Umenzi womatshini we-laser
iphepha lesinyithi kunye nombhobho wefibre laser cutter
isinyithi ixabiso lokusika umatshini
Isinyithi sephepha lokusika i-laser yoyilo
ityhubhu kunye neplate ye-laser yokusika umatshini
Platform enye kunye Tube Laser Cutting Ma ...